လီဗာပူးရဲ့ ရှုံးပှဲမရှိမှတျတမျး ကြိုးပကျြသှားတဲ့ ပှဲစဉျမှ ပွောစရာ အခကျြ ( ၅ ) ခကျြ
January 22, 2021 author one Articles 0
လီဗာပူးအသငျးက အိမျကှငျးမှာ ဘနျလကေို ( 1-0) ရှုံးနိမျ့သှားခဲ့တယျ။ လီဗာပူးက ပထမပိုငျးမှာ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှုအသာစီး ကစားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဘနျလအေသငျးက အကောငျးဆုံး တိုကျပှဲဝငျခဲ့ပွီး လီဗာပူးရဲ့ ကာလရှညျမှတျတမျးကောငျးကို ခြိုးဖကျြနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပထမပိုငျးပွီးခါနီးမှာ Bee Mee ရဲ့ နောကျပွနျပေးပို့မှုကွောငျ့ အိုရီဂီ အပိုငျအခှငျ့အရေးရခဲ့ပမေယျ့ အဆုံးမသတျနိုငျလို့ နဈနာခဲ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဘနျလအေသငျးက ဒုတိယပိုငျး ပွီးဆုံးခါနီးမှာ ပငျနယျတီ ရရှိခဲ့ပွီး ဘားနကျဈက အဆုံးသတျခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ ပှဲစဉျမှ အောကျပါ အခကျြ ( ၅ ) ခကျြက ပွောစရာ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
( ၁ ) သှငျးဂိုးပြာကျဆုံးနမှေုကို ဆကျလကျရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူး
နောကျဆုံး ( ၃ ) ပှဲဆကျ ဂိုးမရရှိခဲ့တဲ့အတှကျ အမှတျတှေ လြော့နညျးခဲ့သလို အမှတျပေးဇယား ထိပျဆုံးနရောကပါ ဆငျးပေးခဲ့ရပါတယျ။ ပထမပိုငျးမှာလညျး အိုရီဂီရဲ့ 1 vs 1 အပါအဝငျ အခှငျ့အရေး အခြို့ကို လှဲခြျောခဲ့ပါတယျ။ ဆာလကျနှငျ့ ဖာမီနိုတို့ကလညျး အခှငျ့အရေးကောငျးတှေ လှဲခြျောခဲ့ပွီး အဝေးကနျခကျြတှကေလညျး ဂိုးပေါကျနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူးအနနေဲ့ လကျရှိမှာ ဂိုးမသှငျးနိုငျတဲ့ပှဲစဉျ ( ၄ ) ပှဲဆကျ ရှိလာပွီ ဖွဈပါတယျ။
( ၂ ) သှငျးဂိုးတဈဂိုး ထပျမံရရှိခဲ့တဲ့ ဘနျလေ
ဘနျလေ အသငျးဟာ ဒီပှဲမတိုငျမီ လကျရှိရာသီ သှငျးဂိုး ( ၉ ) ဂိုးပဲ ရရှိထားပါတယျ။ ပထမပိုငျးအတှငျး ထိရောကျတဲ့ ခွိမျးခွောကျမှုတှေ မပွုလုပျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဘားနကျက ပငျနယျတီကနေ အနိုငျဂိုး သှငျးယူပေးခဲ့ပါတယျ။ ဘနျလအေသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ open play ကနေ သှငျးဂိုး ( ၄ ) ဂိုးသာ ရရှိထားပါတယျ။
( ၃ ) သီယာဂို ဘာလဲ၊ ဘယျလဲ ?
ယခုအပတျအတှငျး လီဗာပူး ကစားသမားဟောငျးက သီယာဂိုဟာ အသငျးနဲ့ ကိုကျညီမှု မရှိကွောငျး ထောကျပွပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဘနျလေ နညျးပွ Sean Dyche က သီယာဂိုကို ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှု အသားပေး ကစားနိုငျခွငျး မပွုလုပျနိုငျစရေနျ ပွငျဆငျခဲ့တယျ။
ဘနျလေ တိုကျစဈမှူးတှအေနနေဲ့ လီဗာပူးခံစဈ ကစားသမားတှကေနေ သီယာဂိုထံ ပေးပို့နိုငျတဲ့ ဘောလုံးလမျးကွောငျးတှကေို တားဆီးခဲ့ပါတယျ။ ယခုပှဲစဉျမှာ သီယာဂိုက ဘောလုံးထိတှမှေု့မြားစှာ ပွုလုပျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဘနျလရေဲ့ နညျးစနဈကွောငျ့ final thirds ထဲရောကျဖို့ အခကျအခဲတှခေဲ့ပါတယျ။
( ၄ ) ကစားသမားတှကေို အလှညျ့ကြ အသုံးပွုမှု
ယာဂနျကလော့အနနေဲ့ ယခုပှဲစဉျမှာ အပွောငျးအလဲမြားစှာ ပွုလုပျခဲ့တယျ။ လီဗာပူးအသငျးက ထုံးစံအတိုငျး ပှဲကို အသားစီး ကစားနိုငျခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆိုပါ ကစားသမားတှရေဲ့ အရညျအခငျြးက အဓိကကတြဲ့နရောတှမှော အလုပျမဖွဈခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။ ဘနျလကေတော့ ပှဲကို အကောငျးဆုံး ပွငျဆငျလာပွီး မြှျောမှနျးထားသလို ကစားနိုငျခဲ့တယျ။
( ၅ ) အမှတျပေးဇယား
မနျစီးတီး နှငျ့ လကျစတာက နိုငျပှဲကိုယျစီ ရရှိခဲ့တဲ့အတှကျ လီဗာပူးအနနေဲ့ အမှတျပေးဇယား အဆငျ့ ( ၄ ) နရောထိ ဆငျးပေးခဲ့ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ( ၄ ) နှဈနီးပါး ကာလအတှငျးမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ အိမျကှငျးရှုံးပှဲ ကွုံတှခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဘနျလအေသငျးကတော့ အနိုငျ ( ၃ ) မှတျ ရယူခဲ့ပွီး အဆငျ့ ( ၁၆ ) နရောကို ရောကျရှိလာကာ တနျးဆငျးဇုံနဲ့ ( ၇ ) မှတျ ကှာဟလကျြရှိပါတယျ။
လီဗာပူးရဲ့ ရှုံးပွဲမရှိမှတ်တမ်း ကျိုးပျက်သွားတဲ့ ပွဲစဉ်မှ ပြောစရာ အချက် ( ၅ ) ချက်
လီဗာပူးအသင်းက အိမ်ကွင်းမှာ ဘန်လေကို ( 1-0) ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တယ်။ လီဗာပူးက ပထမပိုင်းမှာ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီး ကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဘန်လေအသင်းက အကောင်းဆုံး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး လီဗာပူးရဲ့ ကာလရှည်မှတ်တမ်းကောင်းကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာ Bee Mee ရဲ့ နောက်ပြန်ပေးပို့မှုကြောင့် အိုရီဂီ အပိုင်အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမယ့် အဆုံးမသတ်နိုင်လို့ နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘန်လေအသင်းက ဒုတိယပိုင်း ပြီးဆုံးခါနီးမှာ ပင်နယ်တီ ရရှိခဲ့ပြီး ဘားနက်စ်က အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ပွဲစဉ်မှ အောက်ပါ အချက် ( ၅ ) ချက်က ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
( ၁ ) သွင်းဂိုးပျာက်ဆုံးနေမှုကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူး
နောက်ဆုံး ( ၃ ) ပွဲဆက် ဂိုးမရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အမှတ်တွေ လျော့နည်းခဲ့သလို အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ဆုံးနေရာကပါ ဆင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာလည်း အိုရီဂီရဲ့ 1 vs 1 အပါအဝင် အခွင့်အရေး အချို့ကို လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ ဆာလက်နှင့် ဖာမီနိုတို့ကလည်း အခွင့်အရေးကောင်းတွေ လွဲချော်ခဲ့ပြီး အဝေးကန်ချက်တွေကလည်း ဂိုးပေါက်နဲ့ လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးအနေနဲ့ လက်ရှိမှာ ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ပွဲစဉ် ( ၄ ) ပွဲဆက် ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
( ၂ ) သွင်းဂိုးတစ်ဂိုး ထပ်မံရရှိခဲ့တဲ့ ဘန်လေ
ဘန်လေ အသင်းဟာ ဒီပွဲမတိုင်မီ လက်ရှိရာသီ သွင်းဂိုး ( ၉ ) ဂိုးပဲ ရရှိထားပါတယ်။ ပထမပိုင်းအတွင်း ထိရောက်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဘားနက်က ပင်နယ်တီကနေ အနိုင်ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘန်လေအသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ open play ကနေ သွင်းဂိုး ( ၄ ) ဂိုးသာ ရရှိထားပါတယ်။
( ၃ ) သီယာဂို ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ ?
ယခုအပတ်အတွင်း လီဗာပူး ကစားသမားဟောင်းက သီယာဂိုဟာ အသင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဘန်လေ နည်းပြ Sean Dyche က သီယာဂိုကို ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အသားပေး ကစားနိုင်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်စေရန် ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ ဘန်လေ တိုက်စစ်မှူးတွေအနေနဲ့ လီဗာပူးခံစစ် ကစားသမားတွေကနေ သီယာဂိုထံ ပေးပို့နိုင်တဲ့ ဘောလုံးလမ်းကြောင်းတွေကို တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ ယခုပွဲစဉ်မှာ သီယာဂိုက ဘောလုံးထိတွေ့မှုများစွာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဘန်လေရဲ့ နည်းစနစ်ကြောင့် final thirds ထဲရောက်ဖို့ အခက်အခဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
( ၄ ) ကစားသမားတွေကို အလှည့်ကျ အသုံးပြုမှု
ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့ ယခုပွဲစဉ်မှာ အပြောင်းအလဲများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ လီဗာပူးအသင်းက ထုံးစံအတိုင်း ပွဲကို အသားစီး ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ကစားသမားတွေရဲ့ အရည်အချင်းက အဓိကကျတဲ့နေရာတွေမှာ အလုပ်မဖြစ်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘန်လေကတော့ ပွဲကို အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်လာပြီး မျှော်မှန်းထားသလို ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ( ၅ ) အမှတ်ပေးဇယား ။ မန်စီးတီး နှင့် လက်စတာက နိုင်ပွဲကိုယ်စီ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် လီဗာပူးအနေနဲ့ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ( ၄ ) နေရာထိ ဆင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ( ၄ ) နှစ်နီးပါး ကာလအတွင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အိမ်ကွင်းရှုံးပွဲ ကြုံတွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်လေအသင်းကတော့ အနိုင် ( ၃ ) မှတ် ရယူခဲ့ပြီး အဆင့် ( ၁၆ ) နေရာကို ရောက်ရှိလာကာ တန်းဆင်းဇုံနဲ့ ( ၇ ) မှတ် ကွာဟလျက်ရှိပါတယ်။
ဒီဘရိုငျနီ ၄ ပတျအထိနားရဖှယျရှိလို့ လီဗာပူးနဲ့ပှဲကိုပါ လှဲခြျောနိုငျ
ပေါ့ဂျဘာ ခွစှေမျးပွနျပွလာခွငျးရဲ့နောကျကှယျက ပဲ့ကိုငျရှငျဘယျသူလဲ…………(ဆောငျးပါး)